Aung Win Hein (Noble): November 2009
ဟင်လင်ကဲလားဟာ မျက်မမြင်တဲ့အပြင် ဆွံ့အနားမကြားရသူလည်းဖြစ်တယ်။
သူမဟာ နှစ်ထပ်ကွမ်း ဒုက္ခိတဖြစ်တယ်။
သူမဟာအသက်(၂)နှစ်အရွယ်မှာ အပြင်းဖျားပြီးနောက်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
သူမအဖို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတော်ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေရသူဖြစ်တယ်။
တကယ်ဆို စာတတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါ။
ဒါပေမယ့် သူမ ဟာအဲဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွှားပြီး “ဘီအေ အယ်လ်အယ်လ်ဒီ” ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုရခဲ့တယ်။
စာအုပ်တွေအတော်များများကိုရေးခဲ့တယ်။ “ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ” အပါအဝင်စာအုပ်စာတမ်းများစွာကို ပြုစုခဲ့တယ်။
လူတိုင်းအတွက် အတုယူစရာ၊ အားတက်စရာစံပြအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ထပ်ကွမ်းဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့သူမဟာ ဘဝတစ်သက်တာလုံး အတတ်နိုင်ဆုံး လူအများတွေရဲ့ အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဟင်လင်ကဲလားအကြောင်းကိုသိရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်သလိုခံစားမိပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ လူအများရဲ့အကျိုးကို ဘာမှထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးလို့ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့ ဟင်လင်ကဲလားရဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်တိုင်းလည်း စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်ပါတယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်.......... ။
အဲဒီစိတ်က အရှိန်အဟုန်မပျက် လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ဟင်လင်ကဲလားကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
“ကင်ဆာ ရောဂါ - ကာကွယ်ပါ”
ကင်ဆာ ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်း (၉)ချက်မှာ………
1. မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားပါ။
2. ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကို နေ့စဉ်မှန်မှန်လုပ်ပါ။
4. ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မျှတစွာ နေထိုင်စားသောက်ပါ။
6. ဗီတာမင်အားဆေးကို တစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန်သောက်ပါ။
7. နေရောင်ခြည်နှင့်ကြာရှည်စွာ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။
8. လိင်အင်္ဂါမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပါ။
9. ကင်ဆာရောဂါနှင့်ပက်သက်သော ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများ မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။
အမေရိကန်၊ အမျိုးသားကင်ဆာ ကုသဋ္ဌာန
(National Cancer Institute) မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
ကာကွယ်တာဟာ ကုသတာထက် အမြဲတန်း ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ရဲ့အရသာကို နှစ်သက်ပြီးမဖြတ်နိုင်ရင်
လူတိုင်းကသေကြတာတူပေမယ့် သေပုံသေနည်းကတော့ မတူပါဘူး။
အိပ်ယာထဲမှာ (၇- ၈နှစ်) လောက်သူအပါအဝင်
ကိုယ်မဆင်ခြင်ရင် တကယ်တန်းခံစားရမဲ့သူကတော့ ကိုယ်ပါပဲနော်။
Labels: Health, ကာကွယ်ရေး
“ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရင် လူမဟုတ်...”
ပြီးတော့ သားဖွားနှင့်မီးယပ်ဆရာဝန်ဆီ ဝင်လာပြီးပြောတာက
“အောင်မယ်လေး ဆရာရယ်….နာလိုက်တာ။ အန်တီကို ကယ်ပါအုန်း”
သားဖွားနှင့်မီးယပ်ဆရာဝန်က “ကျနော် ကြည့်ပေးပါမယ်။ ကုတင်ပေါ်တက်ပါ”
ထုံဓံအတိုင်း အသေးစိတ် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီးနောက်မှာတော့
“အန်တီ ထလို့ရပါပြီ။ ထူးထူးထွေထွေတော့ ဘာမှ မတွေ့ဘူး”
“အောင်မယ်လေးဆရာရယ်…နာလှချည့်ရဲ့။ မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်ကို နာနေပါလားကွယ့်”
“ကျနော် တွေ့သလောက်တော့ အန်တီ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ဘယ်နားမှာနားနေတာလဲ?”
“အန်တီ၊ သွားနာရင် ဘေးအခန်းက သွားဆရာဝန်ဆီသွားရမှာလေ။
ကျနော်စမ်းသပ်နေတုန်းက အန်တီက ဘာဖြစ်လို့သွားနာတဲ့အကြောင်းကို မပြောတာလဲ?”
“ဘယ်သိပါ့မလဲ၊ ဆရာလေးက ရောဂါရဲ့ဇစ်မြစ်တွေကို ရှာနေတယ်ထင်မိတာကိုး။
အောင်မယ်လေး နာလိုက်တာတော် ”
ဒါနဲ့ပဲ သားဖွားနှင့်မီးယပ်ဆရာဝန်က အန်တီကြီးကို
ကျနော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ရန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါတိုင်း ကျနော်စိတ်ဟာ တင်းကျပ်လာတတ်ပါတယ်။
အဖေနဲ့အမေကို ကျနော် မမုန်းပါ။
ဒါပေမယ့် သူတို့အသံကို မကြားချင်တော့ပါ။ သူတို့နဲ့ဝေးရာကို ပြေးချင်မိပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်ဟာ မြေအောက်ခန်းကိုဆင်းခဲ့တယ်။
ဒီအခန်းလေးထဲမှာ ကျနော်ဝါသနာပါတဲ့ ဟော်ကီကစားဖို့ ပစ္စည်းတွေ အပြည့်အစုံရှိနေပါတယ်။
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာဆိုရင် ဘောလုံးတစ်လုံးကို ဆွဲယူပြီး ရိုက်တံနဲ့ နံရံဆီကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
နံရံကြီးကို ကျနော်ရဲ့အထွေထွေမကျေနပ်မှု အဖြစ်သဘောထားပြီး တအားလွှဲရိုက်လိုက်ပါတယ်။
လေးနေတဲ့ စိတ်တွေ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာ ဟော်ကီချန်ပီယံ ဖြစ်လာပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျနော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်း အရင်ကလောက် ရန်မဖြစ်ကြတော့ပါ။
ဒါဟာ ကနေဒါက ဟော်ကီချန်ပီယံ “သီအိုဒိုရဲ့ငယ်ဘဝ” အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ အစဉ်မပြေမှုဆိုတာ လူတိုင်းကြုံကြရမှာပါ။
အစဉ်မပြေမှုကြုံတိုင်း စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲနေရင်တော့
ဝါသနာပါတာ တစ်ခုခုကို စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဝါသနာဆိုလို့ ကိုယ်ကိုရော၊ အများကို ပါ မထိခိုက်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုသပေါ့လေ။
ဝါသနာကို ရွေးချယ်တာ မှန်ကန်ရင်တော့ အဆိုးဆုံးတွေဟာ